अर्को अचम्म ! अंशु बर्मा पछि टिकटकबाट महिनामै लाखौँ लाख कमाउने यी हुन् 22 वर्षे मन्दिरा ढुंगाना (भिडियो सहित) - Microlink Media::News Media Website
यतिबेला सबैमाँझ लोकप्रिय बन्दै गर्यरहेको छ, टिकटक याप । के बुढा, के बच्चा अझै युवा पुस्ता माँझ त टिकटक यति लोकप्रिय बनेको छ कि, कुरै नगरौं । टिकटकमा भिडियो हाल्ने, आफुले जानेको कला देखाउने मात्र नभएर पछिल्लो समय टिकटकमा बिकृतिहरु पनि देखिएका छन् । यसैबिच यतिबेला टिकटकबाट कमाउने होडबाजी पनि चलेको छ । के टिकटकबाट कमाई हुन्छ त ? धेरै माँझ यहि जित्रासा पनि छ ।
सतुँगलकी मन्दिरा ढुंगाना दिनमा दुई पटक लाईभ बस्छिन्, उनले आफ्नो दैनिक कमाई र मासिक कमाई पनि मिडियामा देखाईन् । शिशिर भण्डारीसँग नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा पुग्दै मन्दिराले नयाँ नयाँ न्युज नेपाल माँझ आएका सामाजिक सहयोगको कुरामा पनि हात बढाईन् । उनले एक बिरामी बच्चालाई रु ५० हजार दिने बाचा गरिन् । टिकटकबाटै कमाएर आफुले काठमाडौंमा जग्गा किनेको बताउँदै मन्दिराले टिकटकबाट कमाई हुँदैन भन्ने कुरा झुट रहेको बताईन् ।
टिकटकबाट यति कमाए, उति कमाए भन्दै बिभिन्न लाईभ होस्टरहरु मिडियामा आईरहँदा सामाजिक भावले मन्दिरा ढुँगाना पनि आएकी छिन् । मन्दिरा आफुले टिकटकबाट अहिलेसम्म ८० लाख भन्दा बढि कमाएको बताउँछिन् । उनले मैले टिकटक बाट यति रकम कमाए भन्दा सबैको प्रश्न थियो कि कहाँ कमाईञ्छ यति धेरै ? कमाएको भए कसैलाई सहयोग गरेको केहि प्रमाण देखिएन। उनले आफुले कमाएको पैसा दुखि गरिबको लागि पनि आबश्यक खाने कुरा लत्ताकपडा दिएको बताउछिन।
र शिशिर भण्डारीको सहायता बाट एक पिडित महिलालाई उनको छोराको लागि ५० हजार सहयोग गरेको भिडियो पनि देख्न सकिन्छ। अर्को होस्ट अँशुबर्माको बिषयमा पनि मन्दिरा बोलिन् । हो टिकटक बाट दैनिक धेरै कमाई हुन्छ ,मेरोलागि म एक टाईम लाइभ बसेको पैसाले मलाई पुगेको छ ,त्यसैले म दिनभरी लाइभ बस्दैन। अँशुबर्मा दिनभरी लाइभ बस्नु हुन्छ मलाई बिश्वास लाग्छ उहाले भने जति पैसा कमाउनु हुन्छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।